Iyo FTC uye Usateedzere
Patova nenhau shoma pamusoro pechikumbiro cheFTC chemakambani eInternet kugonesa maficha anopa simba vatengi kuti vasateedzwe. Dai iwe usina kuverenga iyo 122-peji Privacy chirevo, iwe ungafunge kuti iyo FTC yaive ichimisikidza imwe mhando yemutsara mujecha pane chinhu chavari kukumbira kudaidzwa Usafambisa.
Kune nzira dzinoverengeka dzekuti makambani atarise maitiro evatengi pamhepo. Iyo inonyanya kufarirwa, chokwadika, ndeye mabhurawuza macookie anochengeta dhata neruzivo sezvo iwe uchifambidzana nesiti Mamwe makuki ari wechitatu-bato, zvichireva kuti mutengi anogona kuteverwa munzvimbo dzakawanda. Zvakare, pane nzira dzekutora dhata kuburikidza neFlash mafaira ... izvi zvinogona kusapera uye hazviwanzo kubviswa paunobvisa makuki mubrowser yako.
Usafambisa inosarudzika chinhu iyo FTC yaida kuitiswa iyo inopa simba kumutengi kuti arege kuteverwa. Imwe pfungwa ingori yekungoratidza kana kushambadza kuri kuiswa nedata rakateedzerwa, ichipa mutengi kusarudza kubuda mukutora kwedhata uye kushambadza. Imwe pfungwa kubva kuFTC ndeyekuti, panzvimbo payo, ipe Munguva chaiyo data iro rinogona kushandiswa nemvumo yemutengi kuisa inoenderana shambadziro.
Kunyangwe iyo FTC yaita aya mazano ... uye nekapfungwa kekuti kana iyo indasitiri ikasauya nechimwe chinhu, vanogona… vanozivawo mhedzisiro yehunyanzvi hwakadai. Ichokwadi ndechekuti vatengesi vane mutoro nemakambani epamhepo vari kushandisa hunhu dhata kuti vagadzire zvirinani, zvinonyanya kukosha ruzivo rwevashandisi. FTC inobvuma izvi nekutaura:
Chero ipi michina yakadaro haifanire kukanganisa mabhenefiti ayo ekushambadzira epamhepo maitiro ekupa, nekupa mari zvemukati zvemukati nemasevhisi uye nekupa kushambadza kwakasarudzika kunokosheswa nevatengi vazhinji.
Chirevo Chakavanzika chinoramba chichireva kuti chero repakati registry senge ne USA kufona list haina kujeka uye haizotsvagirwe semhinduro. Iyo FTC Yakavanzika Chirevo, iyo pachayo, inomutsa huwandu hwemibvunzo mikuru:
Mashini akadaro kupiwa kune vatengi uye kushambadzirwa?
Mashini akadaro angagadzirwa kunge ari se yakajeka uye inoshandiswa sezvinobvira kune vatengi?
Chii ichocho zvinogona kuita mari uye mabhenefiti yekupa michina? Semuenzaniso, vangani vatengi
ungangosarudza kudzivirira kunogashira yakanangidzirwa kushambadza?
Vangani vatengi, pane mhedziso uye muzana hwenzvimbo, vakashandisa iyo zvishandiso zvekubuda parizvino yakapihwa?
Ndezvipi zvingangodaro kuchinja kana huwandu hwakawanda hwevatengi hwasarudza kusarudza?
Zvaizokanganisa sei vaparidzi vepamhepo nevashambadziri, uye zvaizoita sei kukanganisa vatengi?
Inofanirwa here pfungwa ye universal sarudzo mashandiro kuwedzerwa kupfuura kushambadzira kwepamhepo kwetsika uye inosanganisira, semuenzaniso, kushambadzira kwetsika kwemaapplication ekushandisa?
Kana chikamu chakazvimiririra chisingashandise inoshanda yunifomu sarudzo yekuzvipira, inofanirwa iyo FTC kurudzira mutemo ichida mashandiro akadaro?
Saka… hapana chikonzero chekuvhunduka panguva ino. Usafambisa hachisi chinhu chechokwadi. Fungidziro yangu ndeyekuti haizombogamuchirwa nevazhinji. Panzvimbo iyoyo, kufanotaura kwangu ndekwekuti chirevo ichi chinotungamira kune hwakajeka hwakavanzika uye maratidziro ekuteedzera pamasaiti (attn: Facebook). Icho hachisi chinhu chakashata, ini ndinofunga vazhinji vepamutemo vatengesi vanokoshesa yakasimba uye yakajeka zvakavanzika zvirevo uye kutonga
Ndinoda kuona pachedu mabhurawuza achitora zvimwe zvekutema nekutumira mameseji zvinopa vashandisi mhinduro yakajeka kana dhata ravo ririkutorwa, ndiani arikuchengeta, uye mashandisirwo aro kuratidza kushambadza kwakakodzera kana zvine simba zvemukati. Kana iyo indasitiri ikakwanisa kupa mamwe matanho, ichave iri budiriro huru kune vese vatengi nevatengesi zvakafanana. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanyira iyo Usafambisa kubatana webhusaiti.
Tags: usafoneusateedzeraftcnguva chete